Mission Yakakosha inowanikwa paGOG neLinux vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Basa Rinokosha inguva yechinyakare yesainzi yekufungidzira iyo yave kuwanikwa pane yeGOG online chitoro ine vhezheni zvakare yevashandisi veGNU / Linux migove. Kana iwe uchishuvira yakanaka yakasarudzika mutambo, une chokwadi chekuda iri zita neiyi nyowani vhezheni yeLinux vashandisi. Yakaburitswa muna 1995 naLegend Varaidzo uye ikozvino yawana basa rakanaka kudzokera mukubwinya kwayo uye zvakare yakafungidzirwa seunyanzvi.
La nyaya yakavakirwa pachikepe chakatyorwa, ganda rayo rakavhurwa uye pakave nekudonha kwepakati, zvichikonzera masystem ezvombo kudonha. Basa rake rinogona kunge riri pamusoro pemakore mashanu ehondo yepakati, asi izvozvi chirongwa chakatadziswa uye kugadzirisa nekukurumidza kunodiwa kuti ararame. Unogona kutamba kubva kubhiriji rekuraira reUSS Lexington yehondo yehondo kuenda kune iri kure uye inouraya nyika Persephone. Nenzvimbo yekuchengetera yevatorwa ine mamiriro ekunze ane hasha, mabhanan'ana, matombo ane njodzi, nezvimwe.
Iye zvino GOG inounza kwauri iwe zvakare, kune vashandisi veLinux. Zvinotaridza kuti mavhezheni ekutanga akange atoyedzwa haana kupa chero dambudziko, anouya neakajairwa mugadziri wepuratifomu iyi, izvo zvamuri kutoziva kare. Mune ino kesi, sezvo iri mutambo wekare, inofanira kuiswa kune DOSBox, iyo DOS emulator iyo iwe yaunogona kuisa pane yako distro. Iyo mifananidzo ingangove isiri yakanyanya kunaka, asi kana iwe uchida sainzi yekunyepedzera, Star Trek uye yakasarudzika mitambo yemavhidhiyo, une chokwadi chekuchida.
Muchokwadi, kana iwe uchitevera iwo akateedzana emamuvhi Star kudii Iwe uchashamisika nemufananidzo waMichael Dorn, kunyangwe iwo magirafu asina kunyanyoipa panguva iyo yaakaburitswa. Mission Yakakosha inofanirwa kutarisa kubva ku Gogi pari zvino. Usamirira…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mission Yakakosha inowanikwa kuGOG neLinux vhezheni